चीन र भारत ः कसको सैन्य शक्ति कति ? – Nepalpostkhabar
चीन र भारत ः कसको सैन्य शक्ति कति ?
nanda । १६ असार २०७७, मंगलवार ०७:३७ मा प्रकाशित
सन् २००८ देखि नै चीनले सैन्य बजेटको आकार बढाउँदै आएको छ । २०१९ को तथ्यांकअनुसार संसारकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य शक्तिमा पहिलोमा अमेरिका र दोस्रोमा रुस पर्दछ । तर सामरिक खर्चको हिसाबले चीन रुसलाई पनि जितेर दोस्रो नम्बरमा आउँछ । स्टकहोल्म इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टिच्यूटका अनुसार चीनको वार्षिक सैन्य बजेट २ खरब ६१ अरब (२६१ विलियन अमेरिकी डलर) छ । चीनको तुलनामा भारतको वार्षिक सैन्य बजेट ७१ अरब १० करोड (७१,१) विलियन अमेरिकी डलर) रहेको छ । पहिलो नम्बरमा आउने अमेरिकाको सैन्य बजेट ७ खरब ३२ अरब (७३२ विलियन) रहेको छ ।
स्टकहोल्म इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टिच्यूटका अनुसार चीनसँग भारतको भन्दा दोब्बर आणविक हतियार छ । सन् २०२० को जनवरीसम्मको तथ्यांकअनुसार भारतसँग १५० वटा वारहेडहरु छन् भने भारतसँग ३२० वटा । स्रोतः विजिनेस इन्साइडर